Famakiana krisimasy mahagaga amin'ny hotely Kildare - IntoKildare
fianakaviana, mpivady, Shopaholics, Food & Drink, zavatra ilaina, Krismasy
Amin'ity vanim-potoana ity, ny hotely Kildare dia maniry ny hitondra anao any amin'ny efitranony mahafinaritra sy ny trano fisakafoanana fety. Na mila toerana hisakafoanana amin'ny fety miaraka amin'ny namana ianao, na toerana hipetrahana mandritra ny dia miantsena na fialofana amin'ny andro lehibe - be dia be ny trano fandraisam-bahiny ao Kildare hankafy ny vanim-potoan'ny Krismasy.
Amin'ity vanim-potoana ity, mahazo aina hatramin'ny iray amin'ireo afo miredareda ao amin'ny mahafinaritra Killashee Hotel ary ankafizo ny 'traikefa fivarotana fety sy fisakafoanana farany'! Ankafizo ny tsironao ary ankafizo ny fijanonana mandritra ny alina izay ahitana sakafo hariva roa sy fihenam-bidy 10% ho an'ny Kildare Village sy Newbridge Silverware.
Festive Shop & Dine Experience manomboka amin'ny €85 isaky ny olona mizara
Havaozy ny traikefanao amin'ny dite hariva amin'ny fety amin'ny €30 isaky ny olona amin'ny volana Desambra.
Fenoy ny lisitry ny fanomezana ary miantsena amin'ny 'Escape Shopping Escape' kintana efatra ao amin'ny Fitsarana Clanard hotely ao amin'ny manodidina tsara tarehy ao Athy, County Kildare. Miantsena ao amin'ny Kildare Village miaraka amin'ny karatra VIP manolotra fihenam-bidy ary avy eo dia mandehana any amin'ny Newbridge Silverware izay ahafahanao mahazo fanomezana amin'ny fetin'ny fihenam-bidy bebe kokoa. Mialà sasatra ary ankafizo ny fitsaboana ao amin'ny Revive Garden Spa ao amin'ny hotely miaraka amin'ny fihenam-bidy €20, arahin'ny sakafo hariva roa ary ny ampitson'iny, misakafo maraina irlandey feno alohan'ny hiainganao!
Avy amin'ny € 160 mandritra ny iray alina ho an'ny olona roa
Amin'ity Krismasy ity, karakarao ny fianakaviana amin'ny haitraitra farany amin'ny kintana 5 K Club. Ity traikefan'ny fianakaviana mandritra ny telo alina ity dia ahitana fetin'ny Krismasy misy dingana efatra ho an'ny fianakaviana rehetra. Aorian'izay, mipetraha ary mankafy ny fihirana an-kira eo am-pisotroana divay voadio eo anoloan'ny afo mirehitra. Tsy vitan'izany fa ny efitranon'ny fianakavianao dia hanana hazo krismasy manokana, ka mahatonga azy io ho trano fialan-tsasatra.
Ao amin'ny 25th, Ho avy i Dadabe Noely ny maraina ary raha manokatra ny fanomezany ny ankizy, dia afaka mandehandeha eny amin'ny trano 550 ianao ary manangom-bokatra amin'ny fety sakafo amin'ny Andro Krismasy! Farano amin'ny dite hariva amin'ny fetin'ny St Stephen's Day ity Krismasy tsy hay hadinoina ity.
Tafiditra ao anatin'izany koa ny fandaharana feno amin'ny hetsika maimaim-poana ho an'ny fianakaviana rehetra.
Manomboka amin'ny € 1,065 isan'alina
Ataovy ny volana Desambra ho fahatsiarovana ao amin'ny Hotely Court Yard amin’izao vanim-potoanan’ny fety izao.
'Wine & Dine' amin'ity ririnina ity ary mankafy Prosecco vera maimaim-poana amin'ny fahatongavana alohan'ny hisakafoana sakafo telo ao amin'ny Steakhouse 1756. Ho fanampin'ny traikefanao, ny Winter Solstice Afternoon Tea no sakafo tonga lafatra amin'ny €30 monja. isaky ny olona.
Wine & Dine Experience manomboka amin'ny €170 ho an'ny olona roa mifampizara.
Karakarao ny fomban'ny fianakaviana Fairmont amin'ity Krismasy ity miaraka amin'ny 2 Night Festive Family Break.
Ity fonosana fety mahafinaritra ity dia misy trano fandraisam-bahiny roa alina ao amin'ny efitranon'ny fianakaviana iray ao amin'ny The Garden Wing ao amin'ny hotely miaraka amin'ny sakafo maraina sy hariva amin'ny takariva tianao. Miaraka amin'ny fidirana maimaim-poana amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny ankizy dia tsy ho leo mihitsy miaraka amin'ny 1,100 hekitara amin'ny taniny tsara tarehy misy lalana ho an'ny fandehanana an-tongotra sy bisikileta, kianja filalaovana tenisy, lalao zaridaina ho an'ny ankizy ary maro hafa!
Moyvalley Fiantsenana miaraka amin'ny Vohitra Kildare!
Angony ny tovovavy mba hiantsena amin'ny vanim-potoana sasany ao amin'ny toeram-pivarotana mirentirenty indrindra ao Kildare misy trano fivarotana 100 mahery azo isafidianana!
Ity fonosana ity dia ahitana fijanonana mandritra ny alina miaraka amin'ny sakafo 2 amin'ny Sundial Bar & Bistro mahafinaritra, sakafo maraina irlandey feno ny ampitso maraina miaraka amin'ny fisavana tara mba hialana sasatra aorian'ny andro fiantsenanao. Saika adinonay ny milaza ny karatra 10% Kildare Village miaraka amin'ny fonosana! Tonga lafatra amin'ny fiantsenana Krismasy.
fianakavianampivadyShopaholicsFood & Drinkzavatra ilainaKrismasy